बामदेवलाई फेरि झस्का दिने प्रधानमन्त्री ओलीको खतिवडा नियुक्ती - HelloKhabar
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ६ महिना अघि नै पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलार्य राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि निर्णय गर्दै सिफारिस गर्न अनुरोध गर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णयलाई सुनेको नसुनै गरिदिए । त्यसपछि बामदेव झस्किएनन् मात्र पार्टी भित्र भाडभैलो समेत भयो ।
अहिले पुनः पार्टीले उनलाई राष्ट्रियसभामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले उक्त निर्णय मान्ने जनाईसकेको छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वटा मन्त्री परिषद बैठक बसाईसके पनि अहिलेसम्म बामदेव गौतमको विषयमा छलफल भएको छैन भने न विषयले नै प्रवेश गरेको छ । बरु, प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्थाका कारण १९ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा. युवराज खतिवडालाई मन्त्री सरह सेवा सुविधा हुने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।
पार्टीले नै निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पनि आफ्नो नियुक्ति सिफारिस रोकिएर बस्ने तर डा. युवराज खतिवडाको तत्काल नियुक्ती हुने भएपछि बामदेव भने पुनः झस्किएका छन् । अहिले बामदेवको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले किन चासो दिएनन् भनेर चासो समेत बढेर गएको छ । सरकारका मन्त्रीहरुले प्राविधिक कारण निर्णय नभएको बताउने गरेका छन् । तर, कतिपयले भने प्रधानमन्त्री ओलीले बामदेवलाई सम्पूर्ण रुपमा आफ्नो कित्तामा ल्याएर मात्र नियुक्त गर्न खोजेको अड्कलबाजी गरेका छन् ।
देशभर थप ११७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
उपत्यकामा थप ६४५ जनामा काेराेना संक्रमण